भारतले पञ्चेश्वर बनाउँदैन, ओलीले पूरक सम्झौता गर्नुपर्छ - Arun K Subedi
‘अब दिल्लीसँग कर्मकाण्डी कुरा गर्ने छुट केपी ओलीलाई छैन’
उहाँ (केपी ओली) लिडर हैन, सडकबाट ‘लेड’ हुनुहुन्छ भन्ने संकेत देखिएको छ । एकथरिले भन्छन्- भारतसँग झुक्लास् । नझुकेपछि त भाँचिन्छ । नझुक्नुको विकल्प के हो ? भाँचिनु । त्यसैले केपी ओलीले नयाँ निर्णय गर्नैपर्छ । ओलीले नयाँ निर्णय नगर्ने र भारतसित नयाँ आयाममा सम्बन्ध विस्तार नगर्ने छुट अब छैन । उहाँले भारत भ्रमणमा ड्याङ ड्याङ निर्णय गरेरै आउनुपर्छ यसपालि ।
झिनाझाँक्रा कसले के भन्ला भनेर हेर्नुहुँदैन । पानीका बारेमा जानकारी नै नहुने मान्छेले राष्ट्रघात भयो भनेर नारा लगाएर हिँड्छ भनेर डराउनुहुँदैन । तथ्य र तर्कले जे प्रमाणित गर्छ, त्यसका आधारमा उहाँले पछाडि नहटिकन केही न केही त गरेरै आउनुपर्छ । ‘गुडविल’का लागि भनेर पहिलेको जस्तो लिपापोती कर्मकाण्डी कुरा गर्ने छुट केपी ओलीलाई छैन ।
किन कार्यान्वयन भएन पञ्चेश्वर ?
महाकाली सन्धीलाई नपढी र नबुझिकन राष्ट्रघाती सन्धि भन्नेहरुको धेरै ठूलो जमात छ नेपालमा । यसको अन्तर्यमा जानुभन्दा पनि यो भारतसँग भएको सन्धिका कारण यसलाई राष्ट्रघाती भन्नुपर्छ भन्ने आग्रहका कारणले नै यसलाई राष्ट्रघाती भनेर आफ्नो राजनीतिक औचित्य सावित गर्ने एउटा जमात त छ नै । तर, महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती थियो भने उहाँहरुले भारतलाई फूलमाला लगाइदिए हुन्छ । किनभने, भारतले यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेन ।
कोशी सम्झौता हुनासाथ कार्यान्वयनमा गयो । गण्डकी पनि सम्झौता हुनासाथ कार्यान्वयनमा गयो । टनकपुर सम्झौतै नभइकन नेपालको २.९ हेक्टर जमिन डुबान गरेर एकलौटीरुपमा कार्यान्वयनमा गयो । तर, एकीकृत महाकाली सन्धिको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण पञ्चेश्वर परियोजनाचाहिँ अहिलेसम्म २२ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा गएन । किन ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो ।
Read More: https://www.onlinekhabar.com/2018/04/670560